कोभिड -१९ परीक्षण सम्बन्धि भ्रम र यथार्थ#Covid19 • Health News Nepal
✍️ डि.एन भट्ट
कोभिड–१९ को परिक्षण कसरी गरिन्छ ?
कोभिड–१९ को लागि २ किसिमको परिक्षण गर्न सकिन्छ ।
१) Screening Test :
रोगिको सम्पर्कमा आएका वा उच्च जोखिममा रहेका तर रोगको विशेष लक्षण, चिह्नहरु नदेखिएका हेर्दा स्वस्थ देखिने व्यक्तिहरुमा गरिने परिक्षण लाई Screening भनिन्छ । यसले रोग भएको सम्भावना देखाउछ तर कन्फर्म भने गर्दैन । यो परिक्षण Rapid Diagnostic Kit (RDT) को विधिद्धारा रगत बाट गरिन्छ । यसले भाईरस विरुद्ध शरिरमा बनेको antibody मात्र देखाउछ तर भाईरस भए नभएको भने थाहा हुदैन । यसले तत्कालै नतिजा दिन्छ । सामान्यतया धेरै जनामा एकै पटक परिक्षण गर्दा यो विधि अपनाईन्छ । यो विधि समुदायस्तरमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
२) Confirmative Test :
RDT बाट पोजेटिभ आएका वा अन्य रोगको सम्भावना उच्च भएका व्यक्तिहरुलाई रोग भए नभएको सुनिस्चित गर्न PCR टेष्ट गरिन्छ । यो टेष्ट सुविधा सम्पन्न प्रयोगशालामा गरिन्छ । यो जाँच थ्रोट स्वाबको नमुना बाट गरिन्छ । यसको रिपोर्ट आउन १ देखि २ घण्टा लाग्न सक्छ । यसबाट भाइरस नै हेर्ने भएकोले भाईरस शरीरमा हुदा मात्र पोजेटिभ आउछ तथापी भाईरस विरुद्ध बनेको Antibody यसमा देखाउदैन । हाल ७ वटै प्रदेशमा RDT र PCR परिक्षण भैरहेको छ ।
यि २ विधि RDT र PCR विचमा अरु के भिन्नता छ ?
कोरोनाको भाईरस मानिसको शरिर भित्र थुकको छिटा मार्फत मुख, नाक वा आँखा बाट प्रवेश गर्छ । त्यसको करिब ५ देखि ७ दिनसम्म शरिरमा भाईरसको संख्या वृद्धि भैसक्छ र यो बेला मानिसको घाँटी, नाक वा स्वासनलीबाट खकारको नमुना लिई PCR विधिबाट परिक्षण गर्दा भाइरस देखिन्छ । यो भाईरस दोस्रो हप्तामा अत्याधिक रुपमा शरीरमा फैलिन्छ । अनि तेस्रो हप्ता देखि विस्तारै कम हुदै जान्छ । त्यसैले ३ हप्ता पछि PCR गर्दा यसमा भाईरस नेगेटिभ हुन सक्छ । तर शरिरमा भाइरस प्रवेश गरेपछि शरिरले यसको विरुद्धमा एक किसिमको प्रोटिन बनाउछ जसलाई Antibody वा immunoglobulin वा Ig भनिन्छ । अध्ययन का अनुसार यो Antibody २ किसिमको हुन्छ : IgG र IgM
IgG भाईरस छिरेको करिब ७ देखि बन्दछ र एक महिना सम्म रहन सक्छ, यसले भर्खरै संक्रमण भएको संकेत गर्दछ । त्यसैगरी IgM करिब १४ दिन देखि उत्पादन हुन्छ जुन केहि लामो समय सम्म रहन सक्छ, यसले केहि पुरानो संक्रमण भन्ने बुझाउछ । हाल कोरोनाको लागि प्रयोग गरिएको द्रुत परिक्षण RDT ले पनि यहि antibody देखाउने हो ।
RDT बाट पोजेटिभ आउदा PCR मा कसरी पोजेटिभ आउछ ?
माथि उल्लेख गरिए अनुसार RDT ले रगतमा antibody उत्पादन भएको मात्र देखाउछ, संक्रमण को तेस्रो हप्ता पछि शरिरमा भाइरस नहुन सक्ने भएकोले PCR नेगेटिभ आउने तर भाइरस विरुद्ध बनेको antibody पछि सम्म रहने भएकोले RDT मा यहि antibody देखिन्छ र पोजेटिभ आउछ । त्यसैले यो अवस्थामा RDT पोजेटिभ आउदा डराईहाल्नु पर्दैन, पहिला नै बनेको antibody रगतमा देखिएकोले पनि यो पोजेटिभ आएको हुन सक्छ ।
RDT बाट नेगेटिभ आउदा PCR मा कसरी पोजेटिभ आउछ ?
भाईरस शरीरमा प्रवेश पछि यसको विरुद्ध antibody बन्न केहि समय लाग्ने भएको ले पहिलो हप्तामा RDT नेगेटिभ पनि आउन सक्छ तर शरिरमा भाईरस भएपछि PCR त पोजेटिभ आउनेनै भयो । त्यसैले RDT नेगेटिभ आएर कोरोना संक्रमण छैन पनि भन्न सकिन्न, RDT बाट नेगेटिभ आएको तर निज कोरोना संक्रमित व्यक्ति संग सम्पर्क भएको ३ हप्ता काटेको छैन भने एक हप्ता पछि पुनः RDT गर्नुपर्दछ । संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका सबैलाई PCR बाट सुनिस्चित गर्नुपर्दछ ।
यसलाई तलको तालिका बाट थप प्रष्ट पार्न सकिन्छ :
PCR पोजेटिभ : संक्रमण छ । पोजेटिभ : संक्रमण छ । पोजेटिभ : संक्रमण छ । ( भाइरस हराउदै जाने हुदा नेगेटिभ पनि हुन सक्छ )
RDT नेगेटिभ : संक्रमण भएको तर Antibody नबनेको ।
पोजेटिभ : संक्रमण भएको र Antibody पनि बनेको ।
पोजेटिभ : संक्रमण नभएको तर Antibody ले गर्दा पोजेटिभ आएको हुन सक्छ ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने संक्रमणको सुरुको र अन्तिम अवस्थामा यि दुबै परिक्षणको नतिजा फरक फरक आउन सक्छ तर विचको अवस्थामा दुबैको नतिजा एउटै अर्थात पोजिटिभ आउन सक्छ । तरपनि पहिले RDT गरि पोजेटिभ आएकालाई PCR बाट कन्फर्म गर्दा लागत कम हुन्छ । IgG र IgM रगतमा रहने समय फरक फरक समय सम्म रहने हुदा नयाँ कि पुरानो संक्रमण यकिन गर्न गाह्रो भएकोले नेपाल सरकारले IgG र IgM को लागि छुट्टा छुट्दै किट प्रयोग गर्ने नेपाल सरकार ले निर्णय गरिसकेको छ ।
Juanjuan Zhao.et al. Antibody Response to SARS-COV-2 in patients of Novel
Corona Virus 2019, March 28, 2020
Government of Nepal, Ministry of Health and population website.
(डि.एन भट्ट, ईटहरी अस्पतालमा कार्यरत हेल्थ असिष्टेन्ट तथा जनस्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ)